Jiri Nano zụta Tether | Paxful
Jiri Nano zụta Tether
Paxful na-eme ka ọ dịrị gị mfe ma nwee nchekwa maka ịzụta ma ijide Bitcoin. Chọta ebumnobi orire na ọzụzụ ahịa kachasị mma n'okpuru ma zụta Bitcoin na Nano taata.
Ọnụahịa otu Tether
Ka e si Azụta Tether na Paxful
Ebumnuche Paxful bu iwetara nde mmadụ ndị na-anaghi enweta ezigbo ọrụ ụlọ akụ nsonye n'ihe ego n'ụwa niile. Anyị na enye gị nnwere onwe ịgbanwere ego gị maka Tether (USDT) ma jiri ya mee ihe masịrị gị; ya bụrụ maka ịkwụ ụgwọ ngwaahịa na ọrụ, ichebe akụ gị megide onu oriri, ịzụrụ ego ntaaneti, ma ọ bụ iji gbochie ọnụ ahịa mgbanwe nke cryptocurrencies.
Na odọahịa ndị ahịa Paxful, ị nwere ike ịzụta Tether ozugbo n'aka ndị ọrụ ibe gị dịka gị si n'akụkụ ụwa niile. N'enweghị ụlọ akụ, ụlọ ọrụ, ma ọ bụ ndị nnọchi anya ọzọ.
Nke a bụ otu esi amalite:
Mepee akaụntụ ma ọ bụ banye na nke gị dị bụ adi. Ibanye na Paxful na enye akpa ego n'efu ebe ị nwere ike ịchekwa USDT gị.
Họrọ usoro ọkwụkwụụgwọ gị, tinye ọnụọgụgụ ịchọrọ imefu na ego ịchọrọ , wee pịa Chọọ ebumnobi orire na ọzụzụ ahịa.
Gaa na ebumnobi orire na ọzụzụ ahịa ọ bụla ma nyochaa usoro na ọnọdụ ha. Lelee ọnụego ndị na ere ahịa setịpụrụ, yana aha ha na nzaghachi iji chọpụta ntụkwasị obi ha.
Ozugbo ịchọtara ebumnobi orire na ọzụzụ ahịa ga adabara ihe ị chọrọ, gosi ego ole ị ga akwụ wee bido ahia ahụ. Nke a ga emeghere gị mkparịtaụka ndụ ebe i nwere ike ikwurịta okwu na òreè na ezigbo oge.
N'oge azụmaahịa ahụ, òreè ga enye nkọwa ndị ọzọ banyere otu esi aga n'ihu. Soro ntuziaka ha nke ọma ma gosipụta azụmahịa ahụ ozugbo ịkwụ ụgwọ.
Ozugbo oree kwadoro ịkwụ ụgwọ ahụ, ha ga ahapụ USDT gị n'enweghị nsogbu na ego edebere ruo na azụchaa ahịa anyị, ozugbo na akpa ego Paxful Tether gị.
Ozugbo ịmechara ahia ahụ, ịnwere ike mefu ụfọ Tether gị na ihe ọ bụla masịrị gị, ma ọ bụ bufee ya na akpa ego ọzọ.
N'ime ụzọ 300 ịkwụ ụgwọ gụnyere ego, nnyefe ego, na kaadị onyinye, ịzụta USDT adịtụbeghị mfe. Ahụghị usoro ọkwụkwụụgwọ ị họọrọ? Mee ka anyị mata ma anyị ga agbakwunye ya na ikpo okwu anyị. Maka ozi ndị ọzọ, lelee Isi Ihe Ọmụma anyị ma ọ bụ kpọtụ ndị otu na nkwado anyị.